ISilken Thomas, iKildare Town yindawo yakho yokugcina oya kuyo. Ukuziqhayisa kokuzinikela komndeni iminyaka engu-45 kusevisi esezingeni eliphakeme kanye nokudla okumnandi kwazo zonke izivakashi. Ukuphaka ukudla kwasekuseni, isidlo sasemini nesidlo sasemini nsuku zonke kuyo yonke indawo nendawo yophahla ephezulu, kuyindawo ekahle eza imvula noma ukukhanya. Akunandaba noma ngabe yisiphi isikhathi uSilken Thomas osimbozile.
Le ndawo ihlotshiswe ngesitayela kuyo yonke indawo ukuze ikwazi ukwenzela ukudla okudlela okungajwayelekile nokuhlangenwe nakho kokudlela kwanamuhla. USilken Thomas unompheme ophahleni wokudlela ongaphandle ohehayo ukuncoma indawo enhle yasendlini ezungezile nayo enikezwayo.
Indawo yokudlela ihlinzeka ngemikhiqizo emisha eholela kwimenyu ethokozisayo yokudla kwamazwe aphakwe ngokuthinta okuhle komcabango. Ngo-2021 yavotelwa ku-10% ephezulu yezindawo zokudlela emhlabeni wonke ngu-Tripadvisor. Okufanele uzame noma yikuphi ukuvakasha eKildare Town.
USilken Thomas ubuye abe nokuthintana kwendabuko nebha ka-Squire's Traditional Irish enkabeni yeKildare Town. Lapha kunohlu olubanzi nolumangazayo lwamabhiya wobuciko, imimoya ephezulu yamashalofu nama-cocktail cocktails. Phumula endaweni yethu entsha esanda kulungiswa yoMtapo Wezincwadi noma ucwilise ezinye zezikhumbuzo zemidlalo yiSquires futhi uthokozele konke okutholakala ezemidlalo. I-Squire's iyitshe legumbi lomculo obukhoma eKildare Town ngokuzijabulisa njalo ngoLwesihlanu, ngoMgqibelo naseBhange Holiday Sunday.
Ngemuva kobusuku obumatasa phumula futhi ubeke izinyawo zakho kwelinye lamakamelo ethu okulala ama-en-suite angama-27 eSilken Thomas Accommodation. Jabulela ukuthenga kosuku eKildare Village Outlet yendawo nge-10% Discount uma ubhuka nathi, kanye nezaphulelo zezinsiza zendawo ezifana neThe National Stud and Gardens. Siphinde sinikeze ukupaka kwamahhala kwazo zonke izivakashi zethu.
Inikezwe isitifiketi sokwenza kahle nguTripadvisor ngo-2021, uSilken Thomas uhlala eletha umuzwa omuhle kubavakashi bawo.
ISilken Thomas itholakala ngaphesheya kwe-13 ku-M7 futhi isenkabeni yeKildare Town.
AmaPub & Impilo yasebusuku, Ithilomu, Ukudla Okuvamile, Ukudlela Kwangaphandle, Umculo Wokuphila, I-Irish / iYurophu, Amahhotela, Umndeni Friendly, 3 Star, Kildare
16, Isikwele Semakethe, Kildare, Isifunda iKildare, Ireland.
Mon - Ilanga: 10am - 11pm